धेरै मानिसहरू धेरै वर्ष अभिनय लागि रूस मा कि थाहा राज्य कार्यक्रम दुई बच्चाहरु संग परिवार को लागि समर्थन को। यो नकारात्मक डेमोग्राफिक रुझान उल्ट्याउन डिजाइन गरिएको छ। प्रत्येक पारित वर्ष संग बढ्छ राशि जो को पैसा को एक योगफल, - कार्यक्रम को सार दोस्रो बच्चा संग एक परिवार प्रसूति राजधानी (आईसी) भुक्तानी भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
Matkapitala प्रापकलाई पहिले नै धेरै लाख रूसी परिवार छन्। अधिकारीहरूले कार्यक्रम देश मा जन्म दर वृद्धि गर्न एकदम प्रभावकारी र सकारात्मक povlilyala हुन सिद्ध भएको छ, विश्वास गर्छन्।
यो कार्यक्रम अर्थात्, यसको अवस्था रूस इलाका भर नै हो, राष्ट्रव्यापी छ। तथापि, पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभ देखि एक प्रस्ताव मा क्षेत्रहरु को अधिकांश मा तथाकथित क्षेत्रीय प्रसूति राजधानी को कार्यक्रम शुरू गरियो।
फरक क्षेत्र को राष्ट्रव्यापी प्रसूति राजधानी कुन हो? सबै को पहिलो, प्रत्येक क्षेत्र भुक्तानी प्राप्त लागि यसको आफ्नै अवस्था सेट भन्ने तथ्यलाई। यो र पैसा को योगफल को आकार यसको प्रयोग को नियम लागू हुन्छ दुवै।
संघीय एम मा जानकारी को मुख्य स्रोत रूस को पेन्सन कोष (Pfr) को आधिकारिक वेबसाइट - pfrf.ru. क्षेत्रीय एम मा जानकारी सन्दर्भमा, त्यसपछि यो गाह्रो छ - यो जो 80. अधिक, तर हो बारेमा क्षेत्रीय matkapitala को अवस्था सामान्य मामलामा गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, region-matkapital.ru वेबसाइटमा फेला स्थानीय अधिकारी, को साइटहरु धेरै भर छरिएका छ - यहाँ सबै क्षेत्रहरु मा सङ्कलन जानकारी।
गरेको रकम सुरु गरौँ। सारा देश र क्षेत्रीय लागि एकल रकम - - संघीय एम लागि यो विभिन्न क्षेत्रहरु मा फरक छ। उदाहरणका लागि, मास्को क्षेत्रमा एक मूल्य छ, र खबरोभ्स्क क्षेत्रमा - एकदम अर्को छ। साथै, प्रत्येक क्षेत्रमा शक्ति प्रत्येक वर्ष यो रकम भिन्न हुन सक्छन्। बाटो गरेर, संघीय एम को (400 हजार 100 हजार rubles विरुद्ध) औसत चार पटक थप क्षेत्रीय आकार।
दोश्रो, प्रापकको यस श्रेणी। दोस्रो वा पछि बच्चा जन्म दिए जो एक महिला - संघीय एम लागि। क्षेत्रीय लागि - चौथो वा पाँचौं बच्चा - तेस्रो बच्चा जन्म दिए जो, तर केही अवस्थामा सामान्यतया महिला। यसलाई भुक्तानी गर्ने अधिकार मात्र ती जसको आय एक निश्चित स्तर तल छ परिवार हुँदा, आय को मामला मा एक सीमा छ हुन्छ। सामान्यतया यो स्थानीय स्तर को निर्वाह न्यूनतम।
तेस्रो, यो प्रयोग सर्तहरू छ। : संघीय एम लागि जो तपाईं पैसा खर्च गर्न सक्छन् ठीक तीन दिशा भेटिएन राम्रो आवास, छोराछोरीको शिक्षा, को गठन पेंशन को आर्थिक सहायता भाग बच्चाको आमा को। एम प्रत्येक क्षेत्रमा क्षेत्रीय क्षेत्रमा लागि निकै भिन्न हुन सक्छन्। कतै तिनीहरूले पूर्णतया अरू पैसा खर्च गर्न सकिन्छ मात्र आश्रय मा राष्ट्रव्यापी एम सी लागि अवस्था, संग एकै समयमा पर्नु, तेस्रो यी धन एक कार वा फर्नीचर रूपमा लागि खरिद गर्न सकिन्छ। सामान्य मा, यो सबै जहाँ परिवार बसोबास निर्भर गर्दछ।
यी राज्य स्तरमा यी दुई भुक्तानी र क्षेत्रहरू, क्षेत्रहरूमा वा गणराज्यहरु को स्तर बीच मुख्य मतभेद छन्। निष्कर्षमा, यो कानून ठाउँमा छैन भने गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा व्यवस्था अक्सर भिन्न: भुक्तानी रकम वृद्धि एम सी को प्रयोग विस्तार गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईं matkapital प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले हाल विकासक्रम मा वास्तविक डेटा थाहा हुनुपर्छ।
Pseudomonas aeruginosa: डराउनु वा
बच्चा को उमेर विशेषताहरु 6-7 वर्ष: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक। वयस्क र बच्चाहरु
शिशु मा Fontanelle कस्तो छ
बच्चाहरु को लागि साहित्यिक काम सानो प्रकारका। मशरूम बारेमा पहेलियों
संसारमा सबै भन्दा ठूलो चरा के हो
तपाईंको आफ्नै हात stroboscope कसरी बनाउने
कसरी तयार सलाद "बकाइन": विचार व्यञ्जनहरु
Alehin Aleksandr Aleksandrovich: पार्टी, फोटो, जीवनी